Ny vavaka, fifandraisana tsy tapaka
"Ary Jesosy nivavaka tao amin’ny fitoerana iray, ka rehefa nitsahatra Izy, dia hoy ny mpianany anankiray taminy : Tompoko, mampianara anay hivavaka." Lioka 11:1
"Mifalia mandrakariva. Mivavaha, ka aza mitsahatra. Misaora amin’ny zavatra rehetra ; fa izany no sitrapon’Andriamanitra ao amin’i Kristy Jesosy ho anareo."1 Tesaloniana 5:16-18
Nivavaka Jesosy. Nandinika Azy ny mpianatra, ary nangataka taminy hoe: “Tompoko, mampianara anay hivavaka”. Ho valin’izany, Jesosy dia nanome azy ireo vavaka atao ohatra, antsoina hoe ny « Rainay Izay any an-danitra ».
Eo amin’ny fiandohany, ity vavaka ity dia manaiky an’Andriamanitra ho Ilay Ray, Ilay nanome antsika ny aina sy mikarakara antsika. Manaraka izany ny faniriana hanome azy ny toeram-boninahitra, ambonin’ny zava-drehetra, ao amin’ny saina sy fontsika: “Hohamasinina anie ny anaranao”. Aorianan’izany vao misy ireo fangatahana. Asehon’izany amintsika fa ny vavaka dia tsy ferana fotsiny ho fitanisana fangatahana amin’Andriamanitra. Ny marina kokoa dia hoe fanehoana ny fifandraisan’ny olona iray amin’Andriamanitra ny vavaka.
Misy lafiny roa ny fifaneraserana amin’Andriamanitra: miteny aminy isika ary miteny amintsika Izy. Mba handrenesantsika Azy, dia tokony ho vonona hihaino ny fo sy ny saina. Miteny amintsika amin’ny alalan’ny Soratra Masina Izy, ary indraindray amin’ny toe-javatra miseho eo amin’ny fiainana. Mety hiteny amintsika ihany koa Izy amin’ny alalan’ny olona iray, na amin’ny alalana zava-mitranga…
Andriamanitra dia Fanahy, koa araka ny Fanahy ihany no ahafahantsika mamantatra Azy (1 Korintiana 2:14). Ampian’ny Fanahy Masina isika, ka mahatakatra ny sitrapon’Andriamanitra sy manonona vavaka mifanaraka amin’izany. Aoka hahazo antoka fa fantatr’Andriamanitra izay rehetra hevitra, hetaheta ary filàn’ny fontsika. Tiany hiova ho fiderana ny fandinidinihana rehetra ataontsika, ary hiova ho vavaka ny faniriana rehetra ao anatintsika.